Booster – Speed Cleaner Pro v1.0.1(နောက်ဆုံးဗားရှင်း) - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Android Cleaner > Booster – Speed Cleaner Pro v1.0.1(နောက်ဆုံးဗားရှင်း)
Booster – Speed Cleaner Pro v1.0.1(နောက်ဆုံးဗားရှင်း)
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 9:15 PM Android application, Android Cleaner
Android ဖုန်းရဲ့memory သန့်ရှင်းရေးခြင်းဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဘက်ထရီကိုတာရှည်ခံစေခြင်း! install လုပ်ပြီးသား / Pre-installed apps များစီမံခန့်ခွဲရန်ဒီ app မှတ်ဥာဏ်က(Speed Booster)Junk /Cache တို့ကိုပါ clean လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖုန်းဂိမ်းဆော့ခြင်း ကိုBooster စေခြင်း , Browser Google Search နှင့် call & SMS အစရှိသည့် History ကိုလည်းသန့်ရှင်းပေးခြင်း Booster – Speed Cleaner AppManager လေးပါဗျာ။ ဖုန်းဖွင့်ခြင်းကို Booster 60 မှ 80% ထိ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းကလည်း
သေသပ်လှပြီး FEATURES အလန်းလေးတွေပါဝင်ထားတဲ့ app မို့ အသုံးပြုရတာကိုလွယ်ကူစေပါတယ်!
Booster – Speed Cleaner Pro v1.0.1(နောက်ဆုံးဗားရှင်း) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:15 PM Rating:5Android ဖုန်းရဲ့memory သန့်ရှင်းရေးခြင်းဖြင့်သင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်ဘက်ထရီကိုတာရှည်ခံစေခြင်း! install လုပ်ပြီးသား / Pre-inst...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:15 PM